China Carbopol 21 mveliso kunye nabenzi | Yinuoxin
Igama: Ii-Acrylates / i-C10-30 iAlkyl Acrylate iCrosspolymer
ICarbopol UIltrez 21: i-acrylate / i-C10-30 ye-alkyl acrylate enqamlezileyo enxibelelene ne-copolymer, ye-denaturation emfutshane, yejeli, ukuhlamba iimveliso zokucoca, iimveliso eziphezulu ze-electrolyte, i-cream, i-emulsion.
ICarbomer 21 I-Carbopol 21 yipolyacrylate eplastikhiweyo eguqulweyo ngamanzi. Isebenza njenge-high-efanelekileyo kunye ne-low-dosage thickener kunye nokumisa i-arhente njengenye i-carbomer resin yendabuko, ikwabonelela ngokunyamezelana kwe-electrolyte kunye nezibonelelo ezizodwa zoluvo kwiifomula. Iyakwazi ukumanzisa ngokukhawuleza nangokulula ngaphandle kokudibanisa okufunekayo. Ingasetyenziswa kwizicelo ezahlukeneyo zononophelo lomntu.
Ukumanzisa ngokukhawuleza kunye neempawu zokudumba
Ukuqina kokusebenza okuphezulu, ukumisa kunye nokuzinzisa kumthamo ophantsi
Ulusu oluphezulu luziva
Ukuhambelana nazo zonke iintlobo zamashishini asebenzayo
Izinto zokuthambisa izandla nomzimba, into yokuthambisa iintsana
Izinto zokucoca izandla
Izinto zokuthambisa elangeni
Ngokwesiqhelo isetyenziswe kwinqanaba le-0.2-1.5%.
I-Carbomer ayihambelani ne-phenol, i-cationic polymer, i-asidi eyomeleleyo kunye ne-electrolyte ephezulu yoxinzelelo. Ezinye ii-antimicrobial agents kufuneka ziphetshwe okanye zisetyenziswe kwiindawo eziphantsi. Ukulandelela isixa sesinyithi okanye esinye isinyithi sotshintsho kunokubangela ukuthotywa kwe-carbomer ukusasazeka. ICarbomer inokuvelisa ubushushu obuninzi xa inxibelelana nezinto ezinamandla zealkali ezifana neammonia, isodiyam hayidroksayidi, ipotassium hayidroksayidi okanye iiine amine ezisisiseko. Amanye amachiza anamaqela asebenzayo e-amino angenza iindawo ezinyibilikayo emanzini kunye ne-carbomer. Ngokwesiqhelo, le meko inokuthintelwa ngokulungelelanisa iiparameter zokunyibilika kolwelo kunye neziselo ezifanelekileyo okanye iipolols.
Ukulandela imisebenzi kufuneka kuthintelwe, kungenjalo kukhokelela ekulahlekeni kwe-viscosity. Ukuvuselela rhoqo okanye ukukhawuleza kwe-shear emva kwe-neutralization ye-UV.
Ukupakisha okusemgangathweni: 20kg Carton
Ukugcina: Gcina kwindawo epholileyo, eyomileyo, enomoya owaneleyo kwaye engenakhanyiso.
Beka ubomi kwishelufa: Iinyanga ezingama-24
Egqithileyo ICarbopol 20
Okulandelayo: ICarbopol 276
I-Jiaoyisan Pr-85 Uthotho oludibeneyo lokuhambisa